RPi-VK-Draịvụ: Onye njikwa GPU na Nkwado Vulkan maka Boards RPI | Site na Linux
Oge ụfọdụ gara aga, Rasberi Pi ntọala, yana Igalia, mere ka a mara nkwonkwo oru na ọha na ezema ọ bụ na mmepe nke onye ọkwọ ụgbọ ala Vulkan maka mbadamba Pipe Pi na nke mbụ ha kwuru na nke a ga-dakọtara naanị na Kacha ọhụrụ osisi nke bụ "Utu Pi 4" na nke ahụ bụ otú ha si malite mbụ ogbo nke mmepe na nke na-adịghị kwuru dị ka ndị dị otú ahụ a kpọmkwem ụbọchị nke mgbe ọ ga-adị njikere ihe njikwa ma ọ bụ banyere mgbe ọ ga-adabara ẹkedori ụfọdụ ezigbo ngwa.
Naanị ihe ha kwuru bụ na nke a ga-ekwe omume na ọkara nke abụọ nke 2020, n'ime nkọwa njikwa E kwuru na nke a na-ejedebeghị na VideoCore VI eserese ome osooso nkwado, eji site na utu Pi 4 ụdị na nke ahụ enweghị ike dakọtara na mbadamba ochie, ya bụ site na 3b + nlereanya azụ a tụfuru ha.
Ọzọkwa, ha kwuru na, ma e jiri ya tụnyere OpenGL, iji Vulkan nwere ike melite arụmọrụ nke ngwa eserese na egwuregwu.
Site na ozi a, ọtụtụ ndị Fans na ndị nwe Raspberry Pi nke na-abụghị ụdị 4 ahụ, nwere nkụda mmụọ n'ihi na ha chere na ewepụrụ ha na ha na-ekwupụta na ọ baghịzi uru ịrụ ọrụ na ịga n'ihu na-akwado nke ọ bụla n'ime bọọdụ ndị a.
Ma, ugbu a na akụkọ na-adịbeghị anya, ọ dị ka ihe agbanweela dịka onye nrụpụta bịara igosipụta nke ọzọ.
Banyere RPi-VK-Driver 1.0
Martin Thomas, onye injinia NVIDIA bụ ọrụ maka mmepe nke RPi-VK-Driver nke bu ihe mmeghe na okwu onye dere ya:
"E mepụtara onye njikwa ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị mmepe dị ka ọrụ onwe onye, ​​nke na-enweghị njikọ na NVIDIA (onye njikwa ahụ mepụtara afọ abụọ gara aga na oge ezumike ya)."
Nke a mbụ version A na-ekesa onye ọkwọ ụgbọala mepere emepe RPi-VK-Driver 1.0 n’okpuru ikikere MIT na Vulkan ndịna API nkwado na-emejuputa atumatu maka ndị okenye Rasberi Pi bọọdụ na Broadcom Videocore IV GPU.
Njikwa Odabara maka ụdị osisi mbadamba Piber niile ewepụtara tupu Rasberi Pi 4.
N'ime ụdị ndị akwadoro, ekwuru ihe ndị a na nchekwa:
1 nlereanya A
1 nlereanya A +
1 nlereanya B
1 nlereanya B +
2 Bdị B
3 Nlereanya A +
3 Bdị B
3 Nlereanya B +
Nkọwapụta Mọdụl 3
Nkọwapụta Mọdụl 3 Lite
Mgbakọ Mgbakọ 3+
Mpempe akwụkwọ mpịakọta 3+ Lite
Ebe ọ bụ na ike nke VideoCore IV GPU, nke a kwadebere na ụdị Raspberry Pi ochie, ezughị maka mmejuputa Vulkan zuru ezu, ihe njikwa na-ebuputa sọọsọ Vulkan API, nke na-adịghị ekpuchi ụkpụrụ niile, ma gbalịa ịgbaso ya dika ndi otu ahu kwere.
Otú ọ dị, arụmọrụ dịnụ zuru oke maka ọtụtụ ngwa na egwuregwu, na arụmọrụ dị nnọọ nso karịa ndị ọkwọ ụgbọala OpenGL n'ihi njikwa nchekwa nchekwa na-arụ ọrụ nke ọma, usoro iwu GPU nwere ọtụtụ usoro, na njikwa njikwa arụmọrụ GPU.
Onye na-ahụ maka ọrụ na-akwado ọrụ dịka MSAA (Mkpọchi akpọ aha ọtụtụ), ihe mkpuchi dị ala na arụmọrụ na-arụ ọrụ. N'ime njedebe, enweghị nkwado maka ndị na-agba GLSL, nke na-erubeghị n'oge a.
Banyere onye edemede, anyị nwere ike ịkọwapụta na ọ bụkwa ya na-ahụ maka ibipụta ọdụ ụgbọ mmiri nke egwuregwu Quake 3 maka Raspberry Pi, nke na-eje ozi dị ka ngosipụta nke ikike nke onye njikwa ọhụrụ ahụ.
Egwuregwu ahụ dabere na ioQuake3 engine, nke agbakwunyere na ya na-egosi na ọ na-adabere na Vulkan, nke ọrụ Quake III Arena Kenny Edition mepụtara. Site na iji njikwa ihe egwuregwu ọhụụ, ọ ga-ekwe omume ịnyefe 100 okpokolo agba kwa nke abụọ (FPS) na Raspberry Pi 3B + bọọdụ na mmepụta 720p.
N'ikpeazụ, gbasara mmejuputa njikwa a nakwa ịmara ozi banyere ya, ha nwere ike ịlele ebe nchekwa njikwa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » RPi-VK-Draịvụ: onye njikwa GPU na nkwado Vulkan maka mbadamba RPI ndị okenye
Ugbua oghere nyocha igwe ebuputala, Google kpebiri na ọ dị otu a